Amasu wamabhendi e Forex Bollinger | ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu wamabhendi e Forex Bollinger
Abadayisi Abaningi isebenzisa Bollinger isu band for forex Ukuhweba ngoba kulula ukusebenzisa kodwa Yebo ukusetshenziswa ngendlela efanele kwalo. Abahwebi uzokwazi uma kuba oversold uma intengo kuseduze kakhulu noma uthinta band engezansi. Abadayisi abaningi wafaka isikhundla Thenga okwamanje. Lapho intengo futhi esondela noma uthinta band engenhla, Abadayisi iningi osebenzisa le izinkomba ngeke anqume ukuba abe sesimweni ethengisa ngalesi sikhathi.
By definition, ngokusho Investopedia, "Is a band ugobe ngeziphambeko amabili standard kude elula ezihambayo ezomhlaba." Uzobona kule inkomba ukuthi unakho 3 bands. Umzimba, engenhla kanye band engezansi. Ibhande maphakathi iyona elula ezihambayo isilinganiso 20 njengoba ngokumiswa ungasakhokhi kwenkathi. The izilungiselelo ezizenzakalelayo band yasenhla nemithombo yasenzansi kuyinto 2, noma ubizwa ngokuthi ukuphambuka.
7 izinsuku ethandwa
Ngu Ukubuyekeza isikolo
I-Bollinger Bands TMA Trend Forex Trading Strategy
UTim Morris - May 5, 2022 0
I-Bollinger Bands Momentum Breakout Forex Trading Strategy
UTim Morris - Ephreli 14, 2022 0
I-Rockstar Bollinger Band Forex Trading Strategy
UTim Morris - Mashi 23, 2022 0
Bollinger Heiken Ashi Trend Forex Trading Strategy
UTim Morris - Novemba 3, 2021 0
I-Bollinger Band Isho Ukuguqulwa Kwamasu Okuhweba Forex
UTim Morris - Agasti 16, 2021 0
UTim Morris - Julayi 19, 2021 0
Bollinger Bounce Forex Ukuhweba Isu
UTim Morris - Januwari 2, 2018 0
Bollinger Band Crossover Forex Ukuhweba Isu
UTim Morris - Disemba 26, 2017 0
UTim Morris - Septhemba 24, 2016 6
Igridi martingale Forex Bollinger Band Strategy
123Ikhasi 1 kwe 3